Berlusconi oo markii ugu horreeysey si toos ah uga hadlay iibka AC Milan – Gool FM
Raage May 25, 2016
(Milano) 25 Maajo 2016 – Silvio Berlusconi ayaa doonaya inuu “iibiyo kooxda Milan, balse waa inuu go’aanka ugu dambeeyaa noqdaa mid sax ah oo caqli ku qotoma isagoo qishay inuu kooxda sii joogayo.
Madaxwaynaha ayaa u warramay barnaamijka ka baxa hilinka Rai Uno ee Porta a Porta ayaa waxaa lasii daayey gabal hordhac ah oo wareeysigaasi ka tirsan.
“Waxaan caddeeyey go’aankayga ku saabsan inaan iibinayo AC Milan. Waxaanse si kastaba aaminsanahay in go’aanka madaxwaynuhu ay tahay inuu noqdaa mid caqli ku dhisan oo sax ah.” ayuu yiri.
“Waxay ila tahay inaan kooxda ku wareejinayo qof awood u leh inuu kooxda maalgeliyo oo dib u hoowlgeliyo. Ma jirto lacag badan oo iibkan ugasoo xaroon doonta Fininvest (oo ah sharikad ay leeyihiin reer Berlusconi oo maamusha Milan), balse waxaa muhim ah lacagta ay tahay in sanad kasta la geliyo kooxda.” ayuu raaciyey.
“Beryahan lacagtu waxay ka timaaddaa ama China ama dalalka saliidda leh.” ayuu yiri Berlusconi oo la filayo inuu madaxwayne sharafeed sii ahaado 2 ilaa 3 sanadood iibka kaddib iyadoo arrintan loo qaadan karo inay markan odayga ka go’an tahay inuu kooxda fasoxo kaddib 3 sano oo ay taageerayaashu ku jireen xaalad jirdil niyadeed ah.
“Chinese-ku waxay u muuqdaan kuwo ay dhab ka tahay waana ku kalsoonahay, waxaana filayaa inuu noqdo go’aan sax ah, haddii aan kooxda iibiyo waxay iga codsadeen inaan sii wado kooxda ugu yaraan 3 sano kale si aan u maamulo suuqa kala iibsiga.” ayuu yiri Berlusconi.
“Dad badan baa i leh haka iibinin Chinese-ka. Haddii aanan helin iibsade aqbala shuruuddeeyda, ma iibinayo kooxdee waxaan samayn doona koox ka kooban ciyaaryahanno Talyaani ah oo da’yar, waloow aysan Italia lahayn dulqaadkaas.” ayuu ku daray isagoo dhanka kale sheegay inay kooxda ka socdaan laacibiin ay ka mid yihiin Alex, Philippe Mexes, Kevin-Prince Boateng iyo Mario Balotelli, halka uusan hubin waxa uu ku dambaynayo Christian Brocchi.
Laacib ku dhaqaaqay tillaabo ay la yaabi doonaan taageerayaasha Real Madrid